merolagani - फरवार्ड लघुवित्त नाफामा सुधार हुँदा प्रतिशेयर आम्दानी कति पुग्यो?
फरवार्ड लघुवित्त नाफामा सुधार हुँदा प्रतिशेयर आम्दानी कति पुग्यो?
Apr 28, 2021 02:32 PM Merolagani
फरवार्ड लघुवित्त (FOWAD) ले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। यस अवधिमा लघुवित्तको खुद नाफा ६६.१४ प्रतिशतले बढेर ३६ करोड १५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा लघुवित्तले २१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो। खर्च र आम्दानीका सूचकहरुलाई सन्तुलनमा राख्दै लघुवित्तले ब्याज आम्दानी र सञ्चालन आम्दानीमा वृद्धि हुदाँ नाफा बढेको हो।
चुक्ता पूँजी ६२ करोड ५५ लाख रुपैयाँ रहेको लघुवित्तको जगेडा कोषमा एक अर्ब ५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ सञ्चित छ।
समीक्षा अवधिमा ६ अर्ब ४४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको लघुवित्तले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत ८ अर्ब ७५ करोड १६ लाख रुपैयाँ ऋण लिएर १५ अर्ब ३३ करोड १६ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ।
यस अवधिसम्ममा लघुवित्तले ८५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको छ। यो गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिको तुलनामा ५१.७७ प्रतिशतले धेरै हो। साथै लघुवित्तको सञ्चालन आम्दानी ६६.१९ प्रतिशले बढेर ५६ करोड ८१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
समीक्षा अवधिमा लघुवित्तको निष्कृय कर्जा अनुपात २.७९ प्रतिशत रहेको छ। लघुवित्तको वार्षिक प्रतिशेयर आम्दानी ७७ रुपैयाँ ७ पैसा कायम भएको छ भने प्रतिशेयर नेटवर्थ २६८ रुपैयाँ ४५ पैसा रहेको छ। लघुवित्तको मूल्य आम्दानी अनुपात ३०.०४ गुणा बढी छ।
लघुवित्त कम्पनीहरुले यसरी उठाए सस्तो ब्याजदरको फाइदा, अधिकांशको नाफामा उच्च वृद्धि
आशा लघुवित्तको नाफामा आकर्षक वृद्धि, प्रतिशेयर आम्दानी ५३ रुपैयाँ पुग्यो
May 04, 2021 09:17 AM
दिनहुँ सकारात्मक सर्किट लेभमा काराेबार भइरहेकाे महिला लघुवित्तको अवस्था कस्तो छ हेराैं ?
May 02, 2021 04:56 PM
धौलागिरीसँग मर्जर प्रकृयामा रहेको आधिखोला लघुवित्तको अवस्था कस्तो छ ?
Apr 29, 2021 01:02 PM
नेरुडे लघुवित्तको नाफामा उछाल, प्रतिशेयर आम्दानी कति पुग्यो ?
Apr 29, 2021 12:53 PM
महुली लघुवित्तको नाफा उल्लेख्य बढ्यो, कसरी ?
Apr 28, 2021 02:24 PM